Amatikiti oQeqeshiso oxabiso eliphantsi e-OBB kunye namaxabiso okuHamba | Gcina A Isitimela
Amatikiti oQeqeshiso oxabiso eliphantsi e-OBB kunye namaxabiso okuHamba
ekhaya > Amatikiti oQeqeshiso oxabiso eliphantsi e-OBB kunye namaxabiso okuHamba
Apha unokufumana lonke ulwazi malunga Amatikiti oololiwe e-OB ashibhile yaye Amaxabiso okuhamba e-OBB kunye nezibonelelo.
izihloko: 1. I-OBB ngamaNqaku oLoliwe
2. Malunga ne-OBB 3. Amagqabantshintshi aphambili Ukufumana itikiti le-OBB lexabiso eliphantsi
4. Axabisa malini amatikiti e-OBB 5. Iindlela zokuhamba: Kutheni kungcono ukuthatha oololiwe be-OBB, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
6. Yintoni umahluko phakathi komgangatho, Intuthuzelo, kunye neSparschiene kwi-OBB 7. Ngaba kukho ubhaliso lwe-OBB
8. Ixesha elingakanani ngaphambi kokumka kwe-OBB ukufika 9. Zithini iishedyuli zoqeqesho ze-OBB
10. Zeziphi izitishi ezihanjiswa yi-OBB 11. I-OBB FAQ
I-OBB ngamaNqaku oLoliwe
Ngomgangatho ophezulu wokufika ngexesha 96%, OBB (ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba yi-OEBB) ngomnye wabaqhubi kaloliwe abanokuthenjwa eYurophu.
Qho ngonyaka, I-OBB iyathatha 447 yezigidi zabantu kwaye 105 yezigidi zeetoni zeempahla ukuya kwiindawo zazo e-Austria naseYurophu.
I-OBB inobuhlobo kakhulu nokusingqongileyo, yaye 100% wabo bonke umbane ufumaneka kumandla ahlaziyekayo.
I-OBB yeyona ndawo ibonelela ngenkonzo enkulu e-Austria.
OBB, Oololiwe baseAustria, lelinye igama loololiwe base-Austrian Federal Railways. Oko yasungulwa phakathi 1923, I-OBB ibonelele ngeenkonzo zokushukumiseka kubemi base-Australia iminyaka ngoku. Uphononongo lwakutshanje lubonise ukuba eYurophu, I-OBB yeyona nto ilungileyo yokufika ngexesha, ukuthembeka, kunye nokuhamba rhoqo.
I-OBB inikezela iinkonzo zikaloliwe ngaphakathi eOstriya nakwiYurophu iphela. Ngetikiti elifanelekileyo, you can visit all the best iindawo zeholide eYurophu. Ngamacandelo ohlukeneyo amatikiti kunye nokubhaliswa kwekhadi, I-OBB ibeka iimfuno zomntu wonke.
I-OBB yoqeqesho rhoqo eVienna – Graz, Salzburg – Vienna, Linz – st. Polten, Igrey - iSalzburg. Unokufika nakwilizwe elingabamelwane ngaphakathi kweYurophu usebenzisa oololiwe be-OBB.
Ngaphesheya kombutho, 41,904 abasebenzi abasebenza koololiwe kunye neenethiwekhi zebhasi (ngaphezulu ngaphezulu 2,000 abafundisayo) qinisekisa ukuba ezinye 1.3 abagibeli abasisigidi bafika ngokukhuselekileyo kwiindawo abaya kuzo yonke imihla.
Yiya e Gcina iKhaya leLoliwe okanye usebenzise lewijethi ukukhangela Iitikiti eziqeqesha i-OBB
Amagqabantshintshi aphambili Ukufumana itikiti le-OBB lexabiso eliphantsi
inombolo 1: Bhukisha amatikiti akho e-OBB kwangaphambili kangangoko unakho
Ixabiso Amatikiti oololiwe e-OBB iyaqhubeka njengoko usuku lokuhamba lusondela. Ungonga imali ngokubhukisha amatikiti akho oololiwe i-OBB kude kangangoko kunokwenzeka ukusuka kusuku lokuhamba. Amatikiti oololiwe e-OBB afumaneka kwangoko 3 ukuba 6 kwiinyanga ezingaphambi kokuba ahambe ngololiwe. Ukubhukisha kwangoko kuqinisekisa ukuba ufumana itikiti le-OBB elisezantsi. Banqunyelwe nenani, kungekudala ubhukisha, Ixabiso eliphantsi kuwe. Ukugcina imali kwitikiti le-OBB, Thenga amatikiti akho kwangoko.
inombolo 2: Ukuhamba yi-OBB ngexesha lokuphumla
Amatikiti e-OBB kaloliwe Ixabiso eliphantsi ngexesha lokuncama, ekuqaleni kweveki naphakathi kwemini. Unokuqiniseka ukuba uyifumana amatikiti etreyini ingabizi phakathi evekini. Ngolwesibini, uLwesithathu, nangoLwesine, Amatikiti oololiwe e-OB yeyona nto enoqoqosho. Ngenxa yomthamo wabahambi abahamba ngebhizinisi besiya emsebenzini kusasa nangokuhlwa, amatikiti kaloliwe axabisa ngaphezulu. Kuxabiso eliphantsi kakhulu ukuhamba ngalo lonke ixesha phakathi kokusa kunye nangokuhlwa. Ngeempelaveki lelinye ixesha eliphakamileyo loololiwe, ngakumbi ngolwesiHlanu nangoMgqibelo. OBB train ticket prices also increase on iiholide zikawonke-wonke kunye neeholide zesikolo.
inombolo 3: Hlela amatikiti akho e-OBB xa uqinisekile ngeshedyuli yakho yokuhamba
OBB oololiwe Bafunwa kakhulu, kunye nokhuphiswano oluncinci, okwangoku bahlala bengokhetho oluphezulu koololiwe e-Austria. Banako ukuhlawula isithintelo setikiti njengale banayo ethintela ukutshintshiselana ngamatikiti okanye ukubuyiselwa kwemali ngaphandle kokuba kuluhlobo lweTikiti lokuthengisa. Nokuba kusekho iiwebhusayithi apho ungathengisa amatikiti wakho wesibini ebantwini, I-OBB ayivumeli intengiso yetikiti lesandla sesibini. Kukunceda njani oku ukugcina imali? Yenza i-tiketi yakho kuphela xa uqinisekile ngeshedyuli yakho ingakusindisa ekubhukeni itikiti elinye kabini kuba into ethile iza kwaye awungekhe usebenzise itikiti lasekuqaleni.
inombolo 4: Thenga amatikiti akho e-OBB kwi Gcina isitimela
Gcina uloliwe ngowona mkhulu, egqibelele, kunye nezona ndleko zixabiso eliphantsi kwitikiti laseYurophu. Unxibelelwano lwethu nabaqhubi abaninzi boololiwe, imithombo yamatikiti kaloliwe, kunye nolwazi lwethu lwetekhnoloji ye-algorithms isinika ukufikelela kwiitikiti zexabiso eliphantsi zetikiti. Asinikezeli amatikiti aseziteksini athengiswa nge-OBB kuphela; sinikezela ngokufanayo kwezinye iindlela ezizezinye kwi-OBB.
Axabisa malini amatikiti e-OBB?
Amatikiti e-OBB aqala ukusuka kwi- € 1,5 ukuya kuthi ga kwi-51 yeerhafu ngohambo olulodwa lukaloliwe. the ixabiso lesitiketi se-OBB kuxhomekeka kuhlobo luni lwetikiti olithengayo kunye nokuba ukhetha ukuhamba nini:
Imigangatho € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Iklasi yokuqala € 1,50 – € 51 € 2,40 – € 100
Iindlela zokuhamba: Kutheni kungcono ukuthatha oololiwe be-OBB, kwaye ungahambi ngenqwelomoya
1) Fika kwiZiko leSixeko. Le yeyona nzuzo yoololiwe be-OBB xa kuthelekiswa neenqwelomoya. Iiloliwe ze-OBB kunye nolunye uhambo lololiwe ukusuka naphi na kwisixeko ukuya kumbindi wesixeko esilandelayo. Iyakongela ixesha kunye neendleko zekhithi ukusuka kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko. Ngokuma kwezitimela, Kulula ukuba ufike naphi na kwisixeko oya kuso. Ayinamsebenzi ukuba usuka phi, eMunich, Salzburg, Linz, okanye iCologne, indawo yokumisa iziko sisixeko esona sibonelelo iluncedo olukhulu koololiwe be-OBB!
2) Ukuhamba ngenqwelomoya ngenqwelomoya kufuna ukuba ube kwisikhululo seenqwelomoya ubuncinci iiyure ezininzi ngaphambi kwexesha lakho lokubhabha. Kuya kufuneka ukhangele ukhuseleko ngaphambi kokuba uvunyelwe ukuba ukhwele inqwelomoya. Ngololiwe be-OBB, kuya kufuneka ukuba ube kwisikhululo esingaphantsi kweyure ngaphambili. Xa ujonge nexesha ekuthatha ngalo ukuya kwisikhululo seenqwelomoya ukuya kumbindi wesixeko, Uyakuqonda ukuba oololiwe be-OBB bangcono ngokwexesha lokuhamba lilonke.
3) Kumphezulu, Ixabiso lamatikiti oololiwe e-OBB abonakala ebiza kakhulu kuneetikiti zomoya. kunjalo, xa uthelekisa zonke iintlawulo ezichaphazelekayo, Amatikiti oololiwe e-OBB anexabiso elingcono lentengo. Ngezinye iindleko ezinjengemirhumo yemithwalo ekungafuneki ukuba uyihlawule koololiwe, uhamba nge-OBB kugqibelele.
4) Oololiwe banobuhlobo kokusingqongileyo. Xa uthelekisa phakathi koololiwe kunye neenqwelomoya, oololiwe babephuma eqongeni. Iinqwelomoya iindiza ziwungcolisa umoya ubushushu bawo ngamanqanaba aphezulu ekhabhoni ayinikelayo. Uloliwe ngokuthelekisa uyakhupha Ikhabhoni engaphantsi kwe-20X kuneenqwelomoya.
Yintoni umahluko phakathi komgangatho, Intuthuzelo, kunye neSparschiene kwi-OBB?
I-OBB ineeklasi ezahlukileyo zetikiti lohlahlo-lwabiwo mali ezahlukeneyo kunye neendidi zabahambi: ingaba lishishini okanye lolonwabo. Unokuqiniseka ukuba elinye lala matikiti liya kukulingana.
Amatikiti asemgangathweni e-OBB:
Elona tikiti lisemgangathweni lelona lithetethe esebenzayo efumaneka e-OBB. Ukuba kufuneka uhambe ngesaziso esifutshane, kuya kufuneka ufumane eli tikiti. Awupheleli kuqeqesho oluthile, kwaye uvunyelwe ukukhetha unxibelelwano lwakho. Itikiti eliqhelekileyo le-OBB livumelekile 2 Iintsuku ngokungakhathali yendlela kunye neendlela zokuthenga. Amatikiti asemgangathweni anokubuyiselwa simahla kwimini ngaphambi kosuku lokuqala kwayo. Xa uthenga le tikiti kwi-intanethi, Kukho imiyalelo ekhethekileyo yokubuyiselwa kunye nokusebenza ngokusemthethweni.
OBB Amatikiti okuthuthuzela:
Amatikiti e-OBB Komfort ahlala enetikiti le-OBB, kwaye zilungiselelwe Unxibelelwano ngesitimela ebusuku. The OBB Komfort ticket covers the cost of the journey, ubhukisho lodidi lokuhamba olukhethiweyo, kunye nesidlo sakusasa kwigumbi lokulala.
Ngokungafaniyo netikiti eliqhelekileyo, itikiti likaKomfort aliguquki konke konke. Ibhukelwe indlela ethile kunye noololiwe abathile. Kuya kufuneka ufumane itikiti elitsha kulo lonke uqhagamshelo ngaphambi nasemva kwendlela egubungela amatikiti.
Ukubuyiselwa kwemali, Amatikiti e-OBB Komfort abuyiselwa simahla ngaphandle 15 iintsuku ukuya kumhla wokuqala wokusebenza. Emva kwe 15 uphawu losuku, Amatikiti e Komfort abuyiselwa kwa 50% yexabiso loqobo.
Amatikiti e-OBB Sparschiene:
Asides from the itikiti eliqhelekileyo kunye netikiti leKomfort, I-OBB inikezela olunye uluhlu lweetikiti ezaziwa ngokuba yitikiti leSparschiene. Olu luhlu lunexabiso eliphantsi kwaye kubahambi ngexabiso eliphantsi. Zimbini iintlobo zamatikiti eSparschiene.
Ngaba kukho ubhaliso lwe-OBB?
Yabemi basekhaya, zimbini iintlobo zobhaliso, ikhadi leVorteils ikhadi kunye ne-Osterreichcard. Kwabangaphakathi sicebisa ukuba uthenge ixesha elide ngaphambi koko kwaye uya kuboniswa ngokukhetha okungabizi kakhulu.
I-Vorteils Card Classic ingathengwa apha: (Abemi balapha bafumana a 45% isaphulelo kwitikiti elinye eliqhelekileyo labakhweli abathenga amatikiti abo)
– Izinto zokubala ze-OBB.
– Kwinkonzo yabathengi ye-OBB 05-1717
– Ukusuka kubasebenzi abakuloliwe be-OBB kunye neebhasi.
Ngeklasikhi ye-Osterreichcard, Uya kufumana isaphulelo esongeziweyo sokubhukisha 5% kwitikiti elinye eliqhelekileyo labakhweli xa uthenga itikiti ukusuka:
– Umatshini wokuthengisa itikiti nge-OBB kwisikhululo sikaloliwe.
Abakhweli abagugileyo 15 kwaye ngaphezulu kunokuthenga iVorteilscard Family. Eli khadi lisebenza ngokudibeneyo nekhadi lokuchonga iifoto, ekufuneka ibandakanye ubudala bokubamba. Ngeli tikiti, Ungahamba kuzo zonke iiloliwe ze-OBB.
Bonke abantu ababambe iVorteilscard Family bayonwabela iicks zeVorteils Card. Ukongeza kwiiklasi zeklasikhi, Abantu ababini ababambe ikhadi leVorteilscard Family Card nabo bayasifumana isaphulelo ukuba bahamba kunye nosana okanye umntwana. 4 abantwana ngabanini beVorteils Card Usapho baya kufumana isaphulelo 100% kwitikiti elinye eliqhelekileyo.
Ikhadi lolutsha laseOstriya
Ukuza kuthi ga kumhla ophambi kweminyaka yabo yokuzalwa engama-26, abakhweli banokuthenga i-Osterreichcard Jugend. Ungangqina iminyaka yakho nge-ID yefoto ngobungqina beminyaka.
Bonke abazali beentsana kunye nabantwana abafumana izibonelelo zosapho eOstriya okanye kwenye indawo banokuthenga i-Osterreichcard Familie. Izibonelelo ziyafana nezo ze-Osterreich Cardiklasikhi.
Abakhweli banokuthenga iOsterreichcard Classic. Ngeklasikhi ye-Osterreichcard, baya kufumana isaphulelo 100% on the cost of seat reservations for 1st and 2nd class. With an Osterreichcard Classic 2nd class, ufumana a 50% Isaphulelo sokutshintsha kweklasi ukusuka kwiklasi yesibini ukuya kweyoku-1 kunye nohlobo oluqhelekileyo lwetikiti elinye.
Abakhweli abadala baseOstriya abaneminyaka yobudala 63 kwaye ngaphezulu unokuthenga iOsterreichcard Senior. Izibonelelo ziyafana nezo ze-Osterreich Cardiklasikhi.
Ikhadi laseOstriya elikhethekileyo
Abantu abakhubazekileyo abanokufaka okulandelayo kwisatifikethi sokukhubazeka kwabo e-Austrian okanye ukhubazeko olunxulumene nemfazwe banokuthenga i-Osterreichcard Spezial. Izibonelelo ziyafana nezo ze-Osterreich Cardiklasikhi.
I-Linz ukuya kwitikiti laseSanta Polten
I-Vienna ukuya kwiitikiti zeSalzburg
I-Saint Polten ukuya kwiitikiti zeWiener Neustadt
Amatikiti eSalzburg ukuya eGrey
Ixesha elingakanani ngaphambi kokumka kwe-OBB ukufika?
Kunzima ukutsho ngokuchanekileyo kwisibini, kodwa Gcina isitimela ucebisa ukuba ufike malunga neyure ngaphambi kokuhamba kwakho. Ukuba ugqiba kulawulo lwencwadana yokundwendwela kwangoko ngokwaneleyo, ungazithenga izinto ozifunayo ukwenza uhambo lwakho lukaloliwe lube semgangathweni kangangoko kunokwenzeka.
Zithini iishedyuli zoqeqesho ze-OBB?
Zeziphi izitishi ezihanjiswa yi-OBB?
Isikhululo saseVienna se-OBB yiVienna Hauptbahnhof (Isitishi esiphakathi eVienna), ebekwe ecaleni kweSudtiroler Platz entliziyweni yeVienna.
KuLinz, Kule mihla uloliwe we-OBB mka kwaye ufike kwisikhululo sikaloliwe iLinz (Isikhululo esiphakathi Ijamani silingana neHauptbahnhof), kude nomfula waseDanube.
Isikhululo sikaloliwe esiphambili (Isitishi esiPhakathi seSalzburg) ifumaneka embindini wedolophu yesibini eOstriya – Salzburg.
Ngaba iiBikes zivumelekile kwiBhodi OBB Oololiwe?
Ngaba abantwana bahamba ngokukhululekileyo koololiwe be-OBB?
Ewe, kodwa ukuya kuthi ga kubudala obuthile. Abantwana abangaphantsi kweminyaka emithandathu ubudala bahamba simahla.
Ngaba izilwanyana zasekhaya zivunyelwe koololiwe be-OBB?
Ewe, zona zide zilandele isikhokelo sezilwanyana zasekhaya. Izilwanyana zasekhaya ezincinci kufuneka zithwalwe kwikhreyithi okanye kwimeko efanayo.
Zithini iinkqubo zokubhoda ze-OBB?
Ezinye izikhululo zine-elektroniki ezibonisa ukwakhiwa koololiwe. Further, Sebenzisa ezi ukukhangela imimandla apho inani labaqeqeshi boqeqesho liya kuba khona xa kufika uloliwe.
Eyona nto iceliwe kwi-OBB FAQ – Ngaba kuya kufuneka ndi-odole isihlalo kwangaphambili kwi-OBB?
wena unako boKulungile a ndiyazie ngaphambili on domestic OBB oololiwe be 3 kowethu. wena ngeke get a personal isitulo emva kokwenza ugcino.
Ngaba kukho i-intanethi ye-WiFi ngaphakathi kwe-OBB?
Ewe. Unokonwaba Intlawulo ye-Intanethi ye-WiFi yasimahla kuzo zonke izitimela ze-OBB nazo zonke iiklasi zokuhamba xa uthenga amatikiti e-OBB (Ngokukhethekileyo kwiSaveATrain.com.
Ukuba ufundile ukuza kuthi ga ngoku, Uyazi konke okufuneka ukwazi malunga noololiwe bakho be-OBB kwaye bakulungele ukuthenga itikiti lakho le-OBB Gcina A Isitimela
Ngaba uyafuna ukumisela eli phepha kwindawo yakho? Cofa apha: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-obb%2F%0A%3Flang%3Dxh - (Skrolela ezantsi ukubona Code lungisela), Okanye unokuxhuma ngqo kweli phepha.